Midowga Murashaxiinta oo QORAAL xasaasi ah kasoo saaray dagaallada Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Midowga Murashaxiinta oo QORAAL xasaasi ah kasoo saaray dagaallada Muqdisho
Midowga Murashaxiinta oo QORAAL xasaasi ah kasoo saaray dagaallada Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Midowga Murashaxiinta mucaaradka ah ayaa si adag loogu canbaareeyey weerarro ay sheegeen in ciidamo ka amar qaata madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ay ku qaadeen guryaha ay Muqdisho ka degan yihiin Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Waraame.
“Weerarka waxaa qayb ka ahaa ciidanka Gorgor ee ay Dawladda Turkiga tababareen, qalabeeyeen, mushaarkana siiyaan. Taliyaha Nabadsugidda Fahad Yaasiin ayaa maanta AMISOM ka daabulay rasaas weerarka looga qayb qaato, ayaa lagu yiri qoraalkan caawa ka soo baxay Golaha Midowga Murashaxiinta.
Sidoo kale golaha ayaa ciidanka AMISOM iyo Dawlada Turkiga oo taageerta Ciidanka Gorgor uga digay in aysan qayb ka noqon waxa ay ku tilmaameen ‘colaada sokeeye’ ee Muqdisho ka qaraxday, isla markaana ay caddeeyaan mawqifkooda ku aaddan taageeradoodii loo isticmaalay dagaalka sokeeye, tallaabo cadna ay ka qaataan arrintaas.
“Waa markii labaad oo ciidanka Farmaajo ay weerar ku qaadaan deegaanka Xasan Sheekh Maxamuud iyo C/raxmaan C/shakuur oo labaduba ka mid ah Midowga Murashaxiinta. Goluhu wuxuu kaloo cambaaraynayaa caburinta iyo cadaadiska ay ku hayaan ciidanka Farmaajo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaa shacabka Muqdisho ee sida nabadda ah u mudaaharaadaya, kuwaasoo ka soo horjeeda muddo kordhinta sharci darrida ah ee uu samaystay,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Ugu dambeyntii Golaha Midowga Murashaxiinta ayaa qoraalkan ku sheegay inay horay uga digeen cawaaqib xumada ka dhalan karta in ciidanka oo loo adeegsado siyaasadda, lagana weeciyo yoolkii la dagaallanka Alshabaab. “Goluhu wuxuu ku baaqayaa in gebi ahaanba ciidanka siyaasadda laga fogeeyo.”